गुगल अर्थको साथ पथ निर्माण गर्नुहोस् Martech Zone
गुगल अर्थको साथ मार्ग बनाउनुहोस्
शनिबार, मार्च 17, 2007 सोमबार, अगस्ट 24, 2009 Douglas Karr
यो इन्डियानापोलिस सांस्कृतिक ट्रेल जीन र मर्लिन ग्लिकको विरासत हो। सांस्कृतिक ट्रेल एक विश्व स्तरीय शहरी बाइक र पैदल यात्री मार्ग हो जुन आसपासका क्षेत्रहरु, सांस्कृतिक जिल्लाहरु र मनोरन्जन सुविधाहरु लाई जोड्दछ, र सम्पूर्ण मध्य इन्डियाना ग्रीनवे प्रणाली को लागि डाउनटाउन हबको रूपमा काम गर्दछ। यो एक शानदार प्रोजेक्ट हो जुन स्थानीय रूपमा यहाँ रुट लिन सुरू गरिएको छ।
प्याट कोयलसँग कुरा गर्दा मैले सोचे कि यो वास्तवमै सांस्कृतिक ट्रेलको नक्सा बनाउन र Google नक्सामा राख्न राम्रो हुन्छ ताकि मान्छेहरू अन्तरक्रिया गर्न सकून्। Google धरती (तपाईं यसलाई नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ) वा वेब साइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ।
गुगल नक्शाको लागि मार्ग निर्माण डरलाग्दो हुन सक्दछ, तर गुगल अर्थको साथ यो सजिलो छ। तपाईं पथ उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ
पथ सिर्जना गर्न। मार्ग उपकरण क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् जहाँ तपाईंको पथ सुरु हुन्छ र अन्त्य हुन्छ। एउटा रेखा कोरिनेछ। प्रत्येक क्लिक पछि मध्य-पोइन्ट उत्पादन गर्दछ। यो प्रकारको ट्रिक हुन सक्छ (ctrl-क्लिक एक पोइन्ट हटाउँछ), तर तपाईं चाँडै नक्शामा पथ उत्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं साइडबारमा तपाईंको लेयरमा दायाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने, तपाईं विवरणहरू थप्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको लेयरको दृश्य र अनुभव परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ, र उचाई पनि सेट गर्न सक्नुहुनेछ।
गुगल अर्थको साथ, तपाईं परिदृश्यलाई पनि ढल्काउन सक्नुहुन्छ र अन्य लेयरहरूको एक टन बारी र बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। उपकरणको शीर्ष-दायाँ सेटले तपाईंलाई जुम गर्न, झुकाउन, तपाईंको दृश्य परिवर्तन गर्न, घुमाउन, र उचाई परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ। अनुप्रयोगको उपयोगिता धेरै सहज छ!
डिसेम्बरमा, गुगल नक्शाले एपीआईमा KML समर्थन थप्यो, ताकि तपाईं सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ KML फाइलको रूपमा तपाईका तहहरूको आउटपुट गर्नुहोस् र Google नक्साको साथ औंल्याउनुहोस्.
साथै, तपाईं आफ्नो लेयरहरू कागजात गर्न र अपलोड गर्न व्यक्तिहरूलाई पत्ता लगाउन तिनीहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिलेसम्म गरेको छैन, तर म चाँडै आउनेछु! यस परियोजनाको पहिलो भाग पथ निर्माण गर्नु थियो। एउटा सफा ट्रिक - मैले सांस्कृतिक ट्रेलको छवि खोलें र यसलाई गुगल अर्थमा आयात गरे। मैले यसलाई करीव percent० प्रतिशत पारदर्शितामा सेट गरेँ र यसलाई ट्रेलको नक्शा बनाउनका लागि गजको रूपमा प्रयोग गरे।
यस प्रोजेक्टको अर्को भागले छविहरूको पोइन्ट्स र पपअपहरूमा माउसओभरहरूको साथ अन्तर्क्रियात्मक नक्शा निर्माण गर्दैछ। राम्रो सामान!
सब भन्दा सजिलो ब्लग च्याट तपाईले कहिँ पनि पाउनुहुनेछ!
के यो वास्तवमै "भीडको बुद्धि" हो?
मार्क्स 19, 2007 मा 1: 23 PM
यो वास्तवमै अचम्मको टेक्नोलोजी हो। नक्शामा नक्शामा उपग्रह सिंहावलोकन राख्ने सुरू गरिएको छैन।
केहि अनुसन्धान समय सेटअप छ कि हामी यसलाई अभ्यास व्यवस्थापन प्रणाली भित्र प्रयोग गर्न सक्दछौं। हाम्रो परामर्शदाताहरूको लागि क्लाइन्टहरूको लागि मार्गहरूको दिशानिर्देशन गर्न राम्रो लाग्नेछ।
मार्क्स 19, 2007 मा 2: 14 PM
दिशा निर्देशनहरू Google नक्सा एपिआईको भर्खरको सुविधा हो त्यसैले यसलाई बाह्य फाइल सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन गुगल अर्थ मार्फत उपलब्ध छ। मार्ग अप्टिमाइजेसन (२+ पोइन्ट्स) अलि कठिन समीकरण हो। त्यहाँ केही विक्रेताहरू छन् जुन यो राम्रोसँग गर्छन् रुटमार्ट तर मैले सेवा कार्यान्वयनको रूपमा कुनै पनि एपीआई वा सफ्टवेयर देखेको छैन।
म निश्चित छु कि त्यो छेउको कुनामा छ! 🙂
म सहमत छु - यो आश्चर्यजनक छ!
मार्स 31, 2007 मा 8: 16 एएम
डग, त्यो धेरै राम्रो छ। बाडेको मा धन्यवाद! म कहिले पनि यस चीजहरू पत्ता लगाउन बस्न सकेन, तर यस्तो लाग्छ कि सम्भावनाहरू अनन्त छन्। एउटा प्रयोग म तुरून्त देख्न सक्छु कि बेच्ने छ कि ग्राहकहरु को वेब साइटहरु मा सही overlays को साथ गूगल नक्शा इम्बेडिंग छ।
मार्स 31, 2007 मा 8: 27 एएम
बिल्कुल, इयान! म अझै यो नक्साको साथ रमाईलो गर्दै छु। मैले खोजी थप्न सक्छु, 'सेल्फ-सर्विस' मार्कर प्रणाली माथि राख्न, राउटिing थप्न, र अन्य सुविधाहरूको पुनःचलन गर्न सक्छ। चेक आउट गर्नुहोस् ठेगाना फिक्स अर्को उदाहरण को लागी। मलाई आशा छ कि यस हप्ता एक अन्तर्क्रियात्मक म्यापि site साइट सेट अप हुनेछ।
BTW: शानदार साइट र तपाइँलाई भेट्नको लागि तत्पर छ। हामी यहाँ ईन्डीमा प्रोफेश्नर्सको एक 'ढीला' नेटवर्क पाएका छौं जुन हामी एक धेरै ग्राहकहरूको साथ काम गर्ने काम गर्दछौं। हामीले तपाईंलाई मिक्समा लिन आवश्यक पर्दछ!
मार्स 31, 2007 मा 10: 52 एएम
मैले Ade थ्रुको बारेमा तपाईको मेरो साथीलाई भेटे। म जस्तो अरूलाई भेट्न सन्चो छ।
अर्को दिन म GMap EZ जाँच गर्दै थिएँ, एक सुपर साधारण ड्रप-इन स्क्रिप्टले गुगल म्याप एपीआईलाई वेबपृष्ठमा राख्नका लागि: http://www.n-vent.com/googlemaptest
यो धेरै राम्रो सामान हो।
मई 31, 2009 मा 5: 52 एएम
दुर्भाग्यवस गुगल अर्थ एक सुविधा हराइरहेको छ: जब तपाईं पथ सिर्जना गर्नुहुन्छ, यसको लम्बाइ नाप्न कुनै सजिलो तरीका छैन।
भाग्यवस, मैले यो समस्या समाधान गरें! यदि तपाईंले .kmz फाईलको रूपमा मार्ग बचत गर्नुभयो भने तपाईं यसलाई मेरो वेबसाइटमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यसले तपाईंलाई मार्गको लम्बाई बताउँदछ। यहाँ लिंक छ:
जुन 4, 2009 मा 4: 59 PM
मैले महसुस गरे कि मेरो अपलोड स्क्रिप्ट बिग्रिएको थियो, तर मैले त्यसलाई ठीक गरें। मैले यो पनि बनाएको छु कि अब तपाईं .kmz पथ फाईलहरू वा .kML पथ फाईलहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भए, यहाँ लिंक छ तपाईंको गुगल अर्थ मार्ग को लम्बाई पाउन: